हरिभक्त कटुवाल ( Haribhakta Katuwal): 2016
हरिभक्त कटुवाल ( Haribhakta Katuwal)
हरिभक्त कटुवाल एक प्रसिद्ध साहित्यकार तथा गीतकार हुन्। हरिभक्त कटुवालको जन्म १९३५, जुलाई २ (विस १९९२ असार १८ गते) असम राज्यमा वीरबहादुर कटुवाल र विष्णुमाया कटुवालको छोरोको रूपमा भएको थियो।
साँची राँखु जस्तो लाग्छ -Video
Posted by ok at 1:49 AM No comments:
कवि कटुवालको घाउ
मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठीकै छु बिथोल्न नआऊ...' जस्ता कहिल्यै नओइलाउने गीत र 'यो जिन्दगी खै के जिन्दगी' जस्ता कालजयी कविता लेख्ने स्रष्टा हरिभक्त कटुवालले यो संसार छाडेको ३५ वर्ष भयो। तर उनले लेखेका गीत सुन्दा र कविता पढ्दा अझै पनि हामीलाई ख्याउटे शरीर, तिखा आँखा अनि तिल र चामल मिसाए जस्तो कपाल भएको टाउको बोकी बेपरवाह तरिकाले काठमाडौंका सडकपेटीमा लर्खराउँदै हिँड्ने एउटा मानिसको झझल्को नआई छाड्दैन।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेको थियो र त्यसप्रति
असन्तोष बढ्दै थियो। त्यही क्रममा २०३६ सालमा ठूलै
Posted by ok at 3:50 AM No comments:
बा, पाठशाला जान्नँ म- कविता-Video
Posted by ok at 3:49 AM No comments:
कतै, जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हेरेको एउटा छुक जस्तो
कतै, भर्खर वसन्तले छोडेर गएको उदास रूख जस्तो
यस्तो लागिरहेछ आफैलाई यो जीवन
अन्तिम पातो पनि च्यातेपछिको एउटा ठूटो चेक बुक जस्तो ।
Posted by ok at 3:42 AM No comments:
जीवन: एक दृष्टि
घरि घरि हावा भरिरहनु पर्ने
बाइस्कलको ट्यूब जस्तो यो जीवन
कति टिठलाग्दो छ !
Posted by ok at 3:41 AM No comments:
खिया लागेका कलका पुर्जाहरू जस्तै
गणितका शुत्रहरू पनि साह्रै पुराना भइसके
केवल इतिहास पानाहरूमा,
मैले त बाँच्नुपर्छ आउने दिनहरूमा
Posted by ok at 3:40 AM No comments:
एक प्रसिद्ध साहित्यकार तथा गीतकार हुन्। हरिभक्त कटुवालको जन्म १९३५, जुलाई २ (विस १९९२ असार १८ गते) असम राज्यमा वीरबहादुर कटुवाल र विष्णुमाया कटुवालको छोरोको रूपमा भएको थियो।
कटुवाल जन्मेको डेढ़ वर्षमा ब्रह्मपुत्रमा आएको बाढीले उनको घरै भत्काइदियो। त्यसपछि कटुवालको परिवार घरबिहीन बन्यो। घरबिहीन बनेर कटुवाल परिवार यताउति भौंतारिहिड्यो। त्यतिमात्र होइन, त्यो घरमा सँधैभरि आर्थिक हाहाकारको बादल मड़ारिरह्यो। विवश थिए बीरबहादुर कटुवाल। आफ्नो श्रीमती र छोरा हरिभक्त कटुवाललाई बिरालुले बच्चा सारेजस्तो कहिले यता, कहिले उता सारिहिँड़े बीरबहादुरले। तर, यो सायदै दैवको परीक्षा थियो, तिनीहरू जतासुकै गए पनि आर्थिक अभावको बादल तिनीहरूमाथिनै मड़ारिरह्यो। त्यतिखेरदेखिको त्यो अवस्था पछिसम्मै रहिरह्यो। आर्थिक अभावको खाड़ल झन् ठूलो, झन् ठूलो हुँदै गइरह्यो, घटेन, सानो भएन। यद्यपि, बीरबहादुर कटुवालले छोरालाई अक्षर चिन्हाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेनन्। यस्तो स्थितिमा पनि तिनले छोरालाई स्थानीय स्कूलमै भए पनि पढ्न पठाए। कटुवालले स्थानीय स्कूलमै क, ख पढ़े। असमियाभाषामै स्कूले शिक्षा ग्रहण गरे। जसोतसो कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि पनि उनले उच्चतर माध्यमिक पढ्न चाहेका थिए, तर पार लगाउन सकेनन्। किनभने उनले उच्चतर माध्यमिक पढ्दापढ्दै डिगबोईको नेपाली स्कूलमा पढ़ाउन थाले। त्यो उनको वाध्यता नै थियो। स्कूल नपढ़ाएर पनि घरको भारमा काँध थाप्नुपर्ने स्थिति थियो र भनौंनै भने त यो उनको निम्ति एउटा अवसर थियो। तिनले अवसर आत्मसात गरे। त्यो स्कूलमा उनी चित्र अनि खेलकूदको गुरू थिए। त्यसैबेला उनले आफ्ना विद्यार्थीलाई नृत्य र सड्गीत पनि पढ़ाए। बड़ो गर्वको कुरा, उनले त्यहाँ सोरठी नृत्यको पनि प्रचलन गराए। उनैका कारणले त्यो ठाँउमा सोरठी नृत्यले पनि लोकप्रियता हासिल गरेको थियो। डिगबोईको विष्णुमन्दिर समितिमा उनले पढाएका विद्यार्थीहरूले पछि नृत्य र गायनमा ख्याति कमाएका थिए। यसको एउटा अलग्गै अध्याय छ। उनले जेसुकै गरे पनि उनको प्रतिभा स्फूरण हुनमा कसै, केहीले रोकेन। कटुवालमा वाड्मयको बहुआयमिक प्रतिभा थियो। त्यसताकको कालखण्डमा उनले त्यहाँ साहित्य लेखन अनि मूर्त र अमूर्त चित्रकलामा ख्याति आर्जन गरे। उनैले डिगबोईमा नेपाली भाषामा आधारित नाटक र एकाड्की नाटक खेल्ने र खेलाउने प्रथाका जग पनि खनेका थिए। उनको कलम सबै विधामा बराबर चलेको छ, यसले तिनलाई बहुआयामिक साहित्यकार बनाइदिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। कटुवालले असमकै सनकसिंह ठकुरी र माया ठकुरीकी छोरी जयकुमारीसँग बिहे गरे। यी दम्पतिबाट तीन छोरी र एक छोरा जन्मे। त्यसपछि स्वास्नी, छोराछोरी हुर्काउन, पाल्न यिनी क्रियाशील भए। कटुवालको एउटा नराम्रो बानी थियो, त्यसैले तिनी जता गए पनि अन्ततः हारेरै फर्कन्थे। त्यसैले हो तिनको स्कूलको जागिर पनि गयो। एकचोटि तिनी हेल्थ इन्सपेक्टर भए, तर त्यो जागिर पनि गयो। यहाँसम्म कि, केही सीप नचलेर तिनले एकचोटि सब्जी पसल पनि थापे। तर अन्तमा, यसमा पनि तिनी टिकेनन्। तिनको यही नटिक्ने बानी अथवा चञ्चले स्वाभावले गर्दा तिनको यो स्थिति भएको थियो। निक्कै क्रियाशील भएर तिनले सब्जीको व्यापार गरेका हुन्। सब्जी ब्यापार गर्दा तिनी मिर्मिरेदेखि रातिसम्म सब्जीमण्डीमानै पलेँटी कसेर बस्थे। तरकारी व्यापारमा पनि उनी टिकिरहन सकेनन् र अर्को व्यवसायको खोजिमा लागे। परिणामस्वरूप उनले परदेशी होटल खोले। उनको होटलमा पनि उधारो भात खानेको जनसंख्या बढ्न थाल्यो। अनि होटल सुकेनासझैं गल्न थालेपछि उनले त्यस ठाँउबाट पनि आँसुले हात धोए। यतिहुँदाहुँदै पनि उनी साहित्य र संस्कृति गतिविधिमा लागि बस्थे। कटुवालले आफ्नै बुताले साँस्कृतिक कार्यक्रम र साहित्यिक गोष्ठीहरूको आयोजना गरिरहन्थे। उनको हरेक सास फेराईमा वाड्मय हुन्थ्यो। त्यसैले उनको भोकतीर्खै वाड्मयमा नै समर्पित थिए। त्यसैबेला उनैको सम्पादनमा मूक्ति र हिमालय साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित भए। त्यसबेला उनी नेपाली साहित्य, सड्गीत र पत्रकारिताका क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध भइसकेका थिए। त्यही रौनकले उनको सर्वत्र चर्चा र परिचर्चा पनि हुन थालेको थियो।
दार्जीलिङका प्रतिभाहरू नेपाल भासिएझौं हरिभक्त पनि नेपाल भित्रिए। विस 2024 -मा नेपालमा राष्ट्रव्यापी साहित्य सम्मेलन भएको थियो। त्यस सम्मेलनमा असमबाट हरिभक्त कटुवालले भाग लिएका थिए। त्यतिबेला केदारमान व्यथितले उनलाई काठमाडौं आउने निम्ता दिएका थिए। 2026 सालमा उनी असमबाट काठमाडौं गए। काठमाडौंमा प्रवेशसँगसँगै कटुवालले काम पनि पाए। त्यसबेला उनलाई व्यथितको पहलमा नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको मुखपत्र प्रज्ञाको प्रबन्ध सम्पादकमा भर्ना गरियो। त्यही समयमा उनी सिद्धिचरण श्रेष्ठ, माधव घिमिरे, विजय मल्ल, ईश्वरवल्लभ, भूपी शेरचन, उत्तम कुँवर र अम्बर गुरुडका सम्पर्कमा पनि पुगे। केदारमान व्यथितले स्थापना गरेको नेपाली साहित्य संस्थानमा पनि कटुवाललाई सचिव बनाइएको थियो। अनि त्यस ठाँउमा साहित्यिक व्यक्तिहरूसँग कटुवाल रक्सी खाई बस्थे। त्यतिबेला उनीसँग साँगी लाग्न घरीघरी भूपी शेरचन र ईश्वरवल्लभ पनि पुग्नेगर्थे। रक्सी खाएका बेला कटुवाल निहुँमात्रै खोज्थे। त्यसैले बिजुली खाएका बेला उनका छेउ स्रष्टाहरू प्रायः जान मान्दैन थिए। रत्नशमशेर थापाका अनुसार रक्सी खाएर मातेका बेला एकपटक कटुवालले भूपी शेरचनको लुगानै च्यातिदिएका थिए। धेरै ठेस लागेपछि कटुवालले जीवन बुझ्दै गए। उनको जीवनको विशेषता हो, उनी इमान्दार थिए। जस्तै कठोर जरीमाना भोग्नु परे पनि उनी असत्य बोल्दैन थिए। यस्तो राम्रो मान्छे पनि जिन्दगीमा सफलता नपाएर रक्सीमा डुब्नथाले। तर त्यही रक्सीले उनलाई डुबाइदियो। 20 वर्षको उमेरदेखि कटुवालले आफ्ना रचना पत्रपत्रिकामा छपाउन थालेका हुन्। लेख्तालेख्तै यिनले काठमाडौं जाँदा एउटा गीतसड्ग्रह, एउटा कविता सड्ग्रह र एउटा खण्डकाव्य लिएर गएका थिए। काठमाडौं गएपछि उनले ‘यो जिन्दगी खै के जिन्दगी’ प्रकाशनमा ल्याए। त्यसै कवितासड्ग्रहले यिनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍यायो। त्यसपछि उनले कथासड्ग्रह ‘स्पष्टिकरण’ प्रकाशित गरे। अनि उनको शेषपछि भीमकान्त उपाध्यायको सङ्कलन र सम्पादनमा ‘बदनाम मेरा यी आँखाहरू’ प्रकाशनमा आयो। त्यस कृतिमा पनि उनका कलजयी गीतिकविता सङ्ग्रहित भए। उनका धेरै कविताहरू गीत बनेका छन्, कर्णप्रिय।
हरिभक्त कटुवाल नेपालबाट असम फर्के पछि १० सेप्टेम्बर १९७९ (विसं २०३७ भदौ २५ गते) ४५ बर्षको उमेरमा अल्सरको कारणबाट मृत्यू भयो ।
कविता/गीतसंग्रह :- सम्झना (२०१६), भित्रि मान्छे बोल्न खोज्छ(२०१८), यो जिन्दगी खै के जिन्दगी?(२०२९) र बदनाम मेरा आँखाहरु(२०४४)
खण्डकाव्य :- सुधा(२०२१)
कथासंग्रह :- ऐतिहासिक(सह-२०२०), स्पष्टीकरण(२०३०)
एकांकीसंग्रह :- म मरेको छैन
सम्पादन :- पूर्व किरण(२०२१)
अनुबाद :- चरित्रपाठ ब्याकरण, शिशुबोध ब्याकरण
कविता यो जिन्दगी खै के जिन्दगी?
यो जिन्दगी खै के जिन्दगी!
भित्र भित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाचेको
बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनुपर्छ यहाँ
खुकुरीको धारमा पाईला टेकेर जीउनुपर्छ यहाँ
आँखा चिम्लिन पनि जग्जगी
आँखा उधार्न पनि जग्जगी
पसलमा सोकेशभित्र सजाईराखेको
काँचको चूरा जस्तो यो जिन्दगी
कुनै युबतीको हातमा चढदा चढ्दै-
रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी
बाटामा हिड्दा हिड्दै-
च्याट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी
Posted by ok at 3:38 AM No comments:
संगीत - कमलमणि क्षेत्री
'बदनाम मेरा यी आँखाहरु'बाट
Posted by ok at 3:10 AM No comments:
उसको नाउँ त रमा हो, तर म उसलाई सूर्यमुखी भनेर नै बोलाउँथेँ । हाम्रो पहिलो भेटा एउटा नाट्यशालामा भएको थियो र छुटानाम पनि नाट्यशालाबाट नै । अचेल सूर्यमुखी मलाई देखेर पनि देख्दिन, चिनेर पनि चिन्दिन । तर मभित्र भने रही-रही एउटा सूर्यमुखी फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ, फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, बाटामा गइरहेकी सूर्यमुखीका दुवै पाखुरा समातेर भनूँ - 'सूर्यमुखी, तँ अझै मेरो हृदयको गमलामा ताजै छेस् । नमार् आफ्नो प्रतिभालाई !'
तर म त्यसो गर्न सक्दिनँ । मेरी सूर्यमुखी अचेल सहरभरिका ठिटाहरूकी रमा मात्र शेष रहन गएकी छ । ऊ जुन सडकबाट हिँड्छे, सडक नै उचालिदिन्छे । होटलमा काम गर्ने ठिटाहरूदेखि लिएर रिक्सावाल, ट्याक्सी ड्राइभर र बाह्रमासेहरूसम्म सुसेली हाल्दै अनेकवली भनेर गिज्याउन लाग्छन् उसलाई । कति पल्ट यस्ता घटना आफ्नै आँखाले देखेको हुँ र ऊप्रति असाध्य घृणा उब्जेको थियो मेरो मनभरि । उसलाई चटक्कै बिर्सिदिने चेष्टा पनि गरेँ तर सकिनँ । रही-रही ऊ फक्रिरही-ओइलिरही-झरिरही ।
वास्तवमा ऊ त्यस्ती थिइन, न त्यस्ती होली भन्ने नै चिताएको थिएँ । मलाई राम्रो थाहा छ, उससँग मैले पहिलो नाटक 'राम वनवास' खलेको थिएँ र त्यसमा ऊ सीता भएकी थिई र म चाहिँ राम भएको थिएँ । नाटकमा ऊ नायिका हुन्थी, आवश्यक पर्दा नाच्थी र बेला-बखतमा गाउँथी पनि । यसरी उसले हाम्रो टोलीमा प्रसिद्धि कमाइसकेकी थिई ।
म अझै त्यही नाट्यशालामा काम गरिरहेको छु । अब नायकको अभिनय गर्न छोडेर म बूढो मान्छेको अभिनय गर्न लागेको छु । वैँश ढल्किसकेकाले पनि होला, अचेल कसैले मलाई नायक बनाउने प्रसंग पनि उठाउँदैन । कथकङ्कदाचित् त्यस्तो कुरा चलिहाले पनि केटीहरू हच्किन्छन् । सायद उनीहरूका लागि म अब नसुहाउने भइसकेको छु । अचेल नाट्यशालामा धेरै नयाँ-नयाँ कलाकारहरू थपिएका छन् र अघिभन्दा दोब्बर चहलपहल पनि बढेको छ । तर मलाई कता-कता ती जम्मै अनुहारहरूभन्दा पर सूर्यमुखीको अनुहारको सम्झना भइरहन्छ । यस्तो लाग्छ, हामी चाहिँ अझै नाट्यशालाभित्र कल्पित नाटक खेल्नैमा व्यस्त छौँ र ऊ चाहिँ त्यो परिधि नाघिसकेर यथार्थ नाटक खेलिरहेकी छ । एक पल्ट उसले भनेकी थिई - 'सुन्नुभो दाइ, हाम्री आमाको बिहे नहुँदै म जन्मेकी रे ! मेरो बाबु म नजन्मिँदै गाउँ छोडेर भागेको रे ! लोग्नेमान्छे कति निष्ठुर हुन्छन् हो कि ? कहिले त जम्मै लोग्नेमान्छेसँग प्रतिशोध लिऊँ जस्तो लाग्छ मलाई ।'
सोच्छु - कतै ऊ प्रतिशोध त लिइरहेकी छैन ? दिनहुँ कति लोग्नेमान्छे उसको पछि लागिरहेका हुन्छन् । कतिले आफ्नो दिनभरिको कमाइ नै फुकिदिन्छन् उसका लागि । सायद ऊ धेरैलाई बिगारेर आमाको इज्जत लुट्नेहरूसँग प्रतिशोध नै लिन लागिरहिछ ।
उसलाई नाट्यशालाबाट निकाल्नमा पनि मेरै प्रमुख हात थियो । रहँदा-बस्दा ऊभित्र गुम्सिरहेको ज्वाला नाट्यशालाभित्रै दन्किन लागेको थियो । बिस्तार-बिस्तार हाम्रो टोलीका धेरै केटाहरू त्यस ज्वालाको लप्कामा परिसकेका थिए र नाट्यशाला नै जल्ने सम्भावना देखिन लागेको कुरा मैले स्पष्ट बुझिसकेको थिएँ । एकदुई पल्ट चेताएको पनि हुँ, तर काम लागेन र अन्त्यमा नचाहँदा-नचाहँदै पनि उसलाई नाट्यशालाबाट बिदा दिनै परेको थियो ।
यी जम्मै कुरा हुँदाहुँदै पनि सूर्यमुखी मेरा आँखामा एउटा बेग्लै मूल्य लिएर उभिन्छे । ऊभित्र रहेको कलाकार मलाई सधैँ भनिरहेको हुन्छ - 'दाइ, जस्तै रोल दिनुहोस्, म खेल्न सक्छु ।'
साँच्चै, ऊ जस्तै रोल पनि खेल्न सक्दी रहिछ भन्ने कुरा नाट्यशाला छोडेपछि सडकभरि, सहरभरि खेलेर देखाइरहेकी छ । एकान्तमा बसेको बेला मभित्र जब ऊ फक्रिँदै जान्छे, अनि एउटा चिसो आशङ्काले मलाई अँचेट्छ - सूर्यमुखीको भविष्य के होला ?
त्यो तिमी होइनौ को भन्न सक्छ?
एउटै छ धरती आकास एउटै
एउटै छ उछवास चाहना एउटै
तरंग धेरै बिक्षिप्त मनमा
आँखाले मात्र को गन्न सक्छ?
तिमी हात म देऊ म पृत दिन्छु
तिमी आँट देऊ म जीत दिन्छु
रहर कुँदेका पाइलाहरूलाई
बन्धनको सागर को खन्न सक्छ?
Posted by ok at 3:09 AM No comments:
मेरो जिन्दगीमा सधैं यो उदासी
सकेकै छु जिउन कहीले नहाँसी
मेरो चाहन हो तिमी हाँसे पुग्छ
मेरो घाऊ तिमी नहाँसे पो दुख्छ
तेसैले म भन्छु तिमी , मुस्कुराऊ
मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाँउ
कतै बिरानीमा हराए भने म
कतै बेहोसिमा कराए भने म
मेरो प्राप्ती त्यही यती ठाने पुग्छ
आन्ध्यारोमै छोड दियो , नजलाऊ
स्वर, संगीत - नारायण गोपाल
Posted by ok at 3:08 AM No comments:
Posted by ok at 3:06 AM No comments:
पोखिएर घामको झुल्का भरि आँगनैमा,
तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलूँ खोलूँ लाग्छ है
सयपत्री फूलसँगै फक्री आँगनैमा,
बतासको भाखा टिपी बोलूँ बोलूँ लाग्छ है ।
कति कति आँखाहरु बाटो छेक्न आँउछन,
परेलीमा बास माग्न कति आँखा धाँउछन
यति धेरै मानिसका यति धेरै आँखाहरु,
मलाई भने तिम्रै आँखा रोजूँ रोजूँ लाग्छ है।
उँडू-उँडू लाग्छ किन प्वाँख कहिले पलायो,
मनको शान्त तलाउको पानी कसले चलायो
आँफैंलाई थाहा छैन कसलाई थाहा होला,
यसैले त तिमीसँग सोधूँ सोधूँ लाग्छ है।
एल्बम - प्रेयसीका यादहरु
म आफ्नै बाटो हिँडिरहेको हुन्छु तर खुट्टा अन्तै कतै गइरहेको हुन्छ
म तिमीलाई नै सम्झिरहेको हुन्छु तर अर्कै कसैले मलाई तानिरहेको हुन्छ
विश्वास गर ! म कायल छु तिम्रो मुस्कान जस्तै यो रक्सीसित
कहिले मैले उसलाई खाइरहेको हुन्छु, कहिले उसले मलाई खाइरहेको हुन्छ ।
कहालिन्छ जब छाती
खिइने छैन यो सृष्टि
दुई आँखाले हेर्दैमा
फुलेको सृष्टिको फूल
यो सुन्दर सृष्टिको गीत
'रचना' पूणाङ्क ८
Posted by ok at 3:04 AM No comments:
स्वर - साधना सरगम/कुमार सानु
संगीत - रनजीत गजमेर
चलचित्र - दुई थोपा आँसु
जून त लाग्यो ताराले मन त लाग्यो मायाले
यो पहाड त्यो पहाड हेर्दा हेर्दै साराले
रंगी-बिरंगी फूलको थुँगा-थुँगा टिपेर
तिमी हिँड्ने गोरेटो सपनाले भरेर
आँखाको नानीमा सजाउनेछन् साराले
परी डुल्ने देशमा पुतलीको भेषमा
मिठो मिठो धुनमा कोइलीको बोलीमा
गाउनेछन् तिम्रो गीत परीहरू साराले
तिम्रो सानो मुटुमा कति धेरै माया छ
तिम्रो सुन्दर आँखामा ममताको छायाँ छ
देख्नेछन् यो माया सबै जगत साराले
स्वर - भारती घिमिरे
Posted by ok at 3:03 AM No comments:
Posted by ok at 3:02 AM No comments:
हिजो एक मित्रकहाँ गएको थिएँ,
एउटा पोको कोठाको कुनामा,
दलिनमा झुण्डिरहेको थियो
ती- अब फेरि आउने जाडो छल्न सुरक्षित राखिएका
सिरक र दोलाईँहरू हुनुपर्छ पक्कै पनि
म पनि झुण्ड्याइदिउँ एउटा ठूलो पोको पारेर
व्यर्थै मलाई चिमोटिरहने यी सपनाहरूलाई,
कतै आउला कि कुनै यस्तो दिन,
जब, फुलाएर तिनै सपना आँखाहरूका फूलबारीमा
हाम्रा छोरा-छोरी र नाति-नातिनाहरू
आनन्दका गीत गाउँदै खेत गोडिरहेका हुनेछन् !
Posted by ok at 3:01 AM No comments:
साँची राखुँ जस्तो लाग्छ
साँची राखुँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई
बाँधी राखूँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई
डर लाग्छ कतै भागी गइदिन्छौ भन्ने
थाहै नपाई पराइको भइदिन्छ्यौ भन्ने
सपनीमै पाए हुन्थ्यो नीदभरि तिमीलाई
नयाँ नयाँ रूप तिमी जति जति हेर्यो
उति उति रसाउँछ हृदय यो मेरो
हार जति मेरो पेवा जीत जति तिमीलाई
स्वर - कुमार सानु